Mmiri mmiri ozuzo ma ọ bụ microburst, ihe nje meteorological viral | Meteorology netwọkụ
Mmiri mmiri ozuzo, nje meteorological viral
Portillo nke German | 06/09/2021 15:27 | Ihe gbasara ihu igwe
Na mbara ụwa anyị enwere ọtụtụ ụdị nke ihu igwe ihu igwe dị oke egwu. Otu n'ime ha bụ iwu mmiri ozuzo ma ọ bụ microburst. Usoro ihu igwe na -ahụ maka ọmarịcha ihe omume ihu igwe na -eme na okike. Ihe ịtụnanya a nke anyị ga -ekwu maka ya yiri ka ọ si na akụkọ sayensị. Ị ga -enyerịrị ụfọdụ ọnọdụ dabara adaba ka ọ bụrụ ihe ịtụnanya.
N'edemede a, anyị ga -agwa gị otu nmiri mmiri si amalite na ihe njiri mara ya.
1 Kedu ihe bụ mgbapụta mmiri
2 Mmiri mmiri ozuzo ma ọ bụ microburst ndụ
Kedu ihe bụ mgbapụta mmiri
Ihe ịtụnanya ọnọdụ ihu igwe a dị ịtụnanya na -agbanwe ụwa niile. Na nke na -emepụta microburst nke a na -akpọkarị mgbapụta mmiri ozuzo. Ọ bụ ihe ihe ihu igwe nke dị ka ihe si na fim akụkọ ifo sayensị. Ọ bụ ihe na -ebibi ihe n'otu oge, ọ mara mma ịhụ.
Ọ na -eme mgbe nnukwu ikuku oyi na -abata na mberede n'etiti oké ifufe. Ikuku a, ebe ọ na -ejupụta ebe ahụ, na -agbadata n'oké ọsọ wee jiri nnukwu ike na -asọda ikuku niile. Mgbe ikuku rutere n'ala, iyi ya niile na -agbapụ na -agbagharị. Mgbe ịkụ n'ala na -ebute ifufe nke ruo kilomita 150 kwa elekere ma na -eweta oke mmiri ozuzo. Enwere ụfọdụ ndị ọkachamara na -akọwa microbursts ndị a dị ka a ga -asị na ọ bụ oke ifufe na -atụgharị.
Tornadoes na -esite n'elu wee jikọọ n'igwe ojii, mana na nke a, ọ dị iche. Ha nwere ike iru mpaghara ọ dịghị ihe karịrị kilomita anọ n'obosara wee pụọ ngwa ngwa. Ihe a niile na -eme ka ọnọdụ ihu igwe a dị ịtụnanya ịhụ.
Mmiri mmiri ozuzo ma ọ bụ microburst ndụ
Anyị ga -egosi tweet ebe ị nwere ike ịhụ mmepe nke microburst ma ọ bụ bọmbụ mmiri ozuzo na -ebi:
Ka i si hụ, ọ dị egwu mana ọ dị mma ilele. N'okwu a, ọ merela n'oké osimiri ka ọ nweghị mmebi ọ bụla. Microbursts ndị a na -ebute ụfọdụ ihe mberede ụgbọelu na nnukwu mmebi ihe ọkụkụ.
Enwere m olile anya na site na ozi a ị ga -amụtakwu gbasara microbursts ma ọ bụ mgbapụta mmiri ozuzo na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Mmiri mmiri ozuzo, nje meteorological viral
Ihu igwe nke ụwa
Kedu ihe bụ meteorite